Naya course » स्तनलाई कसरी आकर्षक बनाउने ? स्तनलाई कसरी आकर्षक बनाउने ? – Naya course
झोलिएको, शिथिल, भद्दा वा अस्वभाविक सानो स्तनलाई आकर्षक मानिदैन । जबकी महिला सौन्दर्यकै एक हिस्सा हो स्तन । त्यसैले अनाकर्षक स्तनले समग्र सौन्दर्यमा असर गर्छ ।
गर्भावस्था, हर्मोनको उतार-चढाव र बढ्दो उमेरसँगै स्तनको सौन्दर्य पनि फिका हुँदै जान्छ । यो प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो ।
यद्यपि स्तनको सौन्दर्य कायम राख्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले विभिन्न विधि अपनाउने गरिन्छ । कृतिम तरिकाले पनि स्तन सुडौल बनाउन सकिन्छ । सर्जिकल विकल्प पनि उपलब्ध छ । यद्यपी सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो, प्राकृतिक तरिका । प्राकृतिक विधीबाट स्तन सुडौल बनाउन सकिन्छ यो प्रभावकारी पनि हुन्छ ।